प्रदेश नं ५ Archives - Page 71 of 83 - Purbeli News
नेपालगञ्ज / बाँकेको खजुरास्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा उपचार सेवा लिन आउने बिरामीको चाप दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । अस्पताल प्रमुख क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा विश्वराज पौडेलका अनुसार सेवा प्रारम्भ गरेको डेढ महिनाको अवधिमा ५२२ जनाको उपचार भएको छ । सरकारीस्तरबाट राजधानी बाहिर भरतपुरपछि यो क्यान्सर अस्पताल दोस्रो हो । असार ९ गते स्वास्...
माडी खोलाकाे पुल निर्माण थालनी
रोल्पा / पश्चिम रोल्पालाई जिल्ला सदरमुकाम लिवाङसँग जोड्न आजदेखि रोल्पाको माडी खोला पुल निर्माण गर्न थालिएको छ । सत्र महिनाभित्र निर्माण सक्ने गरी पुल निर्माणको जिम्मा पाएको एसियाटिक राज जेवी कन्ट्रक्सनले गत असार ३१ गते रु तीन करोड ५१ लाखमा निर्माण गर्ने संझौता गरेको छ । विसं ०६५ मा सडक विभागमा खोलिएको ठेक्कामा काठमाडाँैको लामा÷एडी÷धर्मेन्द्र जे...
पाल्पा / रम्भा गाउँपालिका–५, ताहँुमा प्रशिद्ध रम्भादेवी मन्दिरमा रहेको मूर्ति गाउँलेको घरमा रात बिताउन निस्कन थालेको करीब ४० वर्ष हुन थाल्यो । मन्दिरको मूर्ति पटकपटक चोरी हुन थालेपछि ताहुँको बजार क्षेत्रमा बिहान र साँझमा स्थानीय बासिन्दाको घरमा ल्याउने गर्दछन् । चालिस वर्षदेखि ताहुँ प्रहरी नजिकै स्थानीय बासिन्दाको घरमा राख्न थालेसँगै मन्दिरको मूर...
पेडारी नालामा फेला पर्याे गोही, निल्याे २० किलोको बाख्रा
नेपालगञ्ज / बाँके बैजनाथ र खजुरा गाउँपालिका भएर बग्ने ई–गाउँस्थित पेडारी नालामा गोही भेटिएको छ । गोहीले खजुरा गाउँपालिका ई–गाउँका सेते वलीको २० किलोको बाख्रा खाएको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । गोही अन्दाजी ४० किलो तौलको भएको आँकलन गरिएको छ । दिउँसै नालामा गोहीले बाख्रा निल्न खोजेपछि स्थानीय बासिन्दाको भीड लागेको थियो । सो नालामा यसअघि गोही न...
दाङमा छाडा चौपायाको बिगबिगी
दाङ / तुलसीपुर बजारमा छाडा चौयाया व्यवस्थापन हुन नसक्दा नगरवासीलाई निकै समस्या हुने गरेको छ । बजार मुख्य चोकचोकमा यतिखेर ठूलो सङ्ख्यामा छाडा चौपायाले बिगबिगी मच्चाएका छन् । ती चौपायाले बजार क्षेत्रमा लगाएका बोटबिरुवा खानुका साथै सवारी आवागमनमा समेत समस्या भएको छ । तुलसीपुर बजार विभिन्न चोकचोकमा ठूलो सङ्ख्यामा गाई तथा गोरु रहेका छन् । ...
दाङ / घोराही उपमहानगरपालिका–१ मालझाँक्री सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले खाली रहेको जमीनमा वृक्षरोपण गरी पार्क निर्माण गर्न कामको थालनी गरेको छ । वन समूहले आफ्नो कोषको रु पाँच लाख र दुई लाख बराबरको जनश्रमदानबाट पार्क निर्माणका लागि तारबारसहित वृक्षरोपण गरेको छ । घोराही उपमहानगरपालिका–१ सिमलतारास्थित भूतेरह चौरमा रहेको एक हेक्टर बढी क्षेत्रफलमा तारब...
बुटवल / राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणकोे अवस्थाबारे प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मंगलबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश नं ५ मा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामको प्रगतिका सम्बन्धमा आयोजना प्रमुखसँग जानकारी लिनुभयो । उहाँले ती आयोजना निर्माण समयमै सम्पन्न गर्न के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे आय...
जाजरकोट / पहिरोले भेरी नदी थुनिँदा नलगाड नगरपालिका–१२ ठूलाबगर छेउका ३२ घर उच्च जोखिममा परेका छन् । पहिरोकै कारण ठूलाबगर छेउमा रहेका भवीन्द्र बस्नेत र ककबहादुर बस्नेतको घर बिहानै नदीले बगाइसकेको छ । नदी थुनिएर जमीन कटान गरेपछि भेरी नदीको झुलुङ्गेपुलसमेत उच्च जोखिममा परेको हो । पहिरोले रुकुमको गोतामकोट र जाजरकोट ठूलोबगर जोड्ने भेरी नदीको पुलसमेत जोखि...
बुटवल / तपाईं बुटवलमा घर बनाउँदै हुनुहुन्छ ? घर बनाउन नक्शा डिजाइनका लागि प्रविधिज्ञको खोजीमा हुनुहुन्छ ? अब यसका लागि कुनै झण्झट नउठाउनुस् । तपाईंलाई यसको सेवा बुटवल उपमहानगरपालिकाले आफैं प्रदान गर्ने भएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले नगरभित्र घर बनाउने नगरवासीलाई घर निर्माणका लागि चाहिने नक्शा न्यूनतम शुल्क लिएर आफैं बनाइदिने कार्यक्रम अघि सारेपछि ...
मानव बेचबिखन : आधुनिक प्रविधिले बढायो जोखिम
बाँके / आजभोलि सबै मानिसको हातमा मोबाइल देखिन्छ । अधिकांश युवायुवती मोबाइलमै व्यस्त देखिन्छन् । नेपाली बजारमा प्रविधिले आफूलाई स्थापित गरिरहेको छ । प्रविधिले कतिपय कामलाई निकै सहज बनाएको छ । तर प्रविधिकै कारण नेपाली महिला र बालबालिका बेचबिखनको उच्च जोखिममा पर्ने गरेका छन् । प्रविधिका कारण हिजोआज मानव बेचबिखनमा बिचौलियाको भूमिकासमेत कम हुँदै गएक...